Joker iyo Batman waa labo adduunyo oo aan kulmi doonin sida uu sheegay film soo saare Todd… – Hagaag.com
Joker iyo Batman waa labo adduunyo oo aan kulmi doonin sida uu sheegay film soo saare Todd…
Posted on 10 Oktoobar 2019 by Admin in fanka // 0 Comments
Film soo saare Todd Phillips ayaa wuxuu ku sugnaa goobta, waxaa lagu soo qaaday filimka (Joker) kadib markii uu gaaray guulo waaweyn, isla markaana dhawaan ayaa la weydiiyay su’aal dad badan oo caalamka ku nool oo madaxooda ku wareeganeysay oo aheyd: Ma waxaa jiraya xiriir ka dhexeeya dabeecadda Joker ee la soo bandhigay filimkiisa ugu dambeeyay oo ay la socdaan aflaanta Batman ee soo socda, laakiin Phillips ayaa niyad jab ku riday malaayiin dad ah kadib markii uu si cad ugu jawaabay maya.
Joker iyo Batman waa labo adduunyo oo aan kulmi doonin,
Sannadihii la soo dhaafay waxaan soo aragnay noocyo badan oo Batman iyo Joker ah, oo sida uu Todd Phillips ku sheegay muuqaalkiisii ​​ugu dambeeyay, isagoo la hadlaya weriye ka tirsan majaladda Freetime ayaa sheegay, “Nuquladaani waxay u eg yihiin sheekooyinka la Sawiray iyo riwaayadaha Shakespeare. Waxaa jira daraasiin nuqul ee riwaayada Hamelt oo ku caan baxay Shakespeare sidaa darteed waxaa jira Joker Heath Ledger, Joker Jared Leto, Joker Joaquin Phoenix, sidoo kale Batman, waxaan soo aragnay dhowr jilaa oo soo qadimay. ”
Laakiin xaqiiqda ah in filimkiisii ​​ugu dambeeyay ee Joker iyo filimka soo socda ee Batman, ee uu jilayo Robert Pattinson, oo soo saartay shirkadda, DC, macnaheedu maahan inay wada kulmi doonaan.
Isla waqtigaas, Phillips wuxuu carabka ku adkeeyay inaysan jirin wax sabab u ah shirkadda inay bixiso nooc cusub oo Joker ah oo jilla Robert Pattinson, laakiin ma noqon doonto isla qaabkii ama nuqulkii oo uu soo bandhigay Joaquin Phoenix filimkiisii ​​ugu dambeeyay.
Phillips wuxuu kaloo carabka ku adkeeyay inaysan jirin qeybo kale oo filimka “Joker” oo nuqul khaas ah oo jilla xiddiga Joaquin Phoenix, laakin araga sheekada khaaska ah ee Joker ayaa dhamaatay dhamaadka filimka.